Fiakaran’ny vidim-piainana… mampiaka-peo | NewsMada
Fiakaran’ny vidim-piainana… mampiaka-peo
Mbola mampikaikaika ny vahoaka amin’izao ny fidangan’ny vidim-piainana: mafy, sarotra… Na eo aza, ohatra, ny ezaka ataon’ny fitondram-panjakana amin’itsy sy iroa: tsy hita be ihany. Tsy mahasehaka ny maro sy ny sehatra rehetra, saika tsy mahafa-po, tsy maharitra. Na izany aza, efa zava-dehibe ny fisian’ny karazana fanampiana sy fanohanana ny lafiny sosialy, ny famerana ny vidin’ny entana ilaina andavanandro na mandra-pahatonga ny faran’ny taona ihany aza. Hita sy fantatra ny fahasahiranana, na eo amin’ny vahoaka na ny fanjakana. Aleo misy kely toy izay tsy misy mihitsy?
Na inona atao amin’izao, sarotra sy mafy amin’ny vahoaka ifotony hatrany ny fiatrehana ny fidangan’ny vidim-piainana isan’andro vaky. Tsy misy fiovana sy famavany tsinona ny fidiram-bola ankapobeny eo amin’ny ankamaroan’ny isan-tokantrano, afa-tsy izay mahazo tohana manokana mandritra ny fotoana voafetra angaha. Tsy mety mahasehaka tanteraka ny vidim-piainana ny fahafaha-mividin’ny isam-batan’olona sy ny isan-tokantrano. Hany ka ny fandaniana isan’andro no tsy maintsy ahena araka izay azo atao sy zaka. Nefa tsy mahavaha olana izany, fa mahakely aina aza.
Mila ainga sy ezaka manokana izay hahazoana mampiakatra ny fahafaha-mividin’ny isan-tokantrano? Efa misy, ohatra, ny karazana tetikasa eo amin’ny sehatry ny fihariana, amin’ny famoronana asa… Na izany aza, mila ainga vaovao, ohatra, ny politika momba ny vola: tsy voafehy ny fiovaovan’ny sandam-bola saika tsy mitsaha-midina ny vola eto an-toerana mitaha amin’ny vola vahiny. Vao mainka mitotongana izay taorian’ny fiatrehan’izao tontolo izao ny ady amin’ny valanaretina Covid-19. Mandra-pahoviana? Mila fanapahan-kevitra, fahasahiana, fijoroana, fahavononana…
Tsy vitan’izany, amin’izao fiatrehana ny voka-dratsin’ny fiovaovan’ny toetr’andro izao: mampanahy be ihany ny taom-pamokarana noho ny tsy fisiana na tsy fahampian’ny orana, ahina hidangana koa ny vidim-bokatra… Mila atrehina dieny izao? Mampiaka-peo ny maro na ny fiakaran’ny vidim-piainana na ny hafanana…